काठमाडौँ। छोराछोरीको भेदभाव बर्षौदेखि चल्दै आएको छ।समाजमा प्राय:जसो छोराको तुलनामा छोरी अपहेलित हुँदै आएकाछ्न। यिनै समाजमा हुने गरेका बिस्कृतिलाई मुख्य बिषय बनाइएको भिडियो सार्बजनिक भएको छ। छोरी माथीको भेदभाव हटाइयोस भन्ने सन्देश दिन निर्माण गरिएको म्युजिक भिडीयो 'छोरी हुँदा के बिराए?' सार्बजनिक भएको हो।
गीतमा 'द भइस अफ नेपाल सिजन २' कि प्रतिस्पर्धी गिता शर्माको स्वर रहेको छ। शब्द रचना र संगीत बि.बि. रोक्दुङ को रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा जिवन्त अभिनय गर्ने कलाकारहरुमा रश्मि भट्ट, कमल सिंह, ग्रेसी शाही, प्रकाश बस्नेत र रुपा कार्की रहेकाछ्न।
यस भिडियोलाई माधब बेलबासेले सम्पादन गरेका छ्न। मुख्य सहायक निर्देशकमा विशाल अर्याल र छांयाकन तथा निर्देशन अमृत सुनुवारको रहेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र ९, २०७७, ०७:५८:०५